(WARBIXIN):- Alshabaab oo gacanta ku dhigay Taliyihii Ciiddanka Kenya ee Saldhigga Ceel-cadde iyo Saraakiil kale. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Waaberigii hore ee Jimcihii la soo dhaafay, Dagaalyahano ka tirsan Alshabaab oo lagu qiyaasay ilaa 400 oo ruux ayaa waxay dagaal qorsheysan kula jarmaadeen Saldhigga Ciiddanka Kenya ku lahaayeen Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Khubarada Milliteriga ayaa rumeysan inay Alshabaab heleen Xog ku aadan in Askarta Kenyaanka ee joogta Xeradda yihiin Ciiddan cusub oo muddo labo isbuuc keliya ku sugan Xeradda.
Ciiddankaasi oo ka tirsan Guutadda 9-aad ee Milliteriga Kenya ee fadhigoodu yahay Degmadda Eldoret (The Eldoret-based 9KR battalion), waxayna Xeradda joogeen waqti kooban oo aysan ku fahmi karin jihooyinka ay Alshabaab ka jiraan iyo halka laga soo weerari karo.
Haweeneyda Wasiirka Difaaca ka ah Kenya, Raychelle Omamo waxay sheegtay in Saldhiga Ceel-cadde uu qaadi karo ilaa 250-Askari, isla markaana waxay qirtay inay Ciiddanka soo gaareen khasaaro.
Tiro aan la aqoonin oo Askarta Kenya ayaa la sheegay in halkaasi lagu dilay, halka kuwo kalena ka baxsaday Saldhigga Ceel-cadde, kadib, markii ay Alshabaab kala kulmeen weeraro culus.
Taliska Milliteriga Kenya ayaa sheegay inay bilaabeen Hawlgal Badbaadin iyo Samata-bixin, iyadoo boqolaal Askari loo soo daabulo Nawaaxiga Saldhigga Ceel-cadde.
Afhayeenka Ciiddanka Kenya, Colonel David Obonyo ayaa sheegay inay 2 Askari ka soo badbaadiyeen meel dhowr Kiilomitir u jirta Saldhigga Ceel-cadde, kuwaasi oo shalay dib ugu laabtay Nairobi.
Mid ka mid ah ayaa ka dhaawacnaa lugaha, waxayna muddo dhowr maalmood ku jireen hawdka, iyagoo aan wax cunin, waxna cabin.
Waxay ka mid ahaayeen 4 Askari oo baxsatay, una sii dhawaaday meel ku dhow Xuduudka Kenya.
Ugu yaraan 15 kale ayaa la sheegay inay weli ku go’doonsan yihiin dhulka Hawdka,
Sidoo kale, ilaa 30 kale oo iyagan u suurto-gashay inay ka badbaadaan weerarkii Ceel-cadde ayaa loo duuliyey magaalladda Nairobi, kuwaasi oo ada u aanfariirsanaa.
Saraakiisha ayaa sheegay in dhibaatadda ugu weyn tahay Askarta oo aan haysanin Qalabka Gurmadka, sida Jiheeyaha iyo Qalabka kale ee la shaqeeya Dayax-gacmeedka, si ay Diyaaradaha Gurmadka u arkaan Signalka halka ay ku go’doonsan yihiin marka ay la kulmaan khatar dagaal.
Maydadka Askarta Kenya ayaa la sheegay inay weli yaallaan halkii ay ku geeriyoodeen, waxaana shalay suurtogeli weyday Diyaarad Xamuul oo ku degi lahayd Xeradda Ceel-cadde si ay u soo ururiyaan Maydadka Askarta Kenya.
Taliyaha Guud ee Milliteriga Kenya, Gneeral Samson Mwathethe ayaa sheegay in ugu yaraan 12 Askari oo uu ku jirey Taliyihii Saldhigga Ceel-cadde oo darajadiisu ahayd Gaashaanle (Major) ayey Alshabaab gacanta ku dhigeen.
Waxa uu intaasi ku daray in ay hayaan warbixino sheegayo inay Alshabaab qaar ka mid ah Askarta u adeegsan rabaan Gabaad, wuxuuna intaasi ku daray inaysan oggolaan karin inay khasaaro kale ku dhacaan Askarta Kenya.
Wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in boqolaal Askar Kenyaan ah soo galeen Gobalka Gedo, kuwaasi oo baaritaano dhulka iyo cirka ka wada nawaaxiga Ceel-cadde.
Waxaa la sheegay inay heleen maydad ku dayacnaa agagaarka Ceel-cadde iyo dhulka hawdka, kuwaasi oo la qorsheynayo in lagu qaado Diyaarad lagu wado inay caawa ka degto Garoonka Diyaaradaha ee Wilson Airport ee magaalladda Nairobi.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda ma cadda tirada rasmiga ee Askarta Kenya ee lagu dilay weerarkii ay Alshabaab ku qaadeen Saldhigga Ceel-cadde, kaasi oo la sheegay inuu ahaa kii ugu cuslaa ee ay Alshabaab la beegsadeen Saldhigyadda Askarta AMISOM ku lahaayeen Deegaanadda Leego, Jannaale iyo Qoryooleey.